I-Luxury Lakefront Cottage - I-Airbnb
I-Luxury Lakefront Cottage
Whiteshell, Manitoba, i-Canada
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Gerrilyn
U-Gerrilyn Ungumbungazi ovelele
Izwa impilo yechibi ngobuhle bayo obuphambili ekhabetheni lethu eliseduze kwechibi eliseCaddy Lake. Leli kotishi lakhiwe ngokukhululeka nokunethezeka engqondweni. Ihlotshiswe kahle futhi inefenisha, inikeza indawo yokuphumula nakho konke okudingayo ngeholide lomndeni ongasoze walibaleka. Ikotishi litholakala kahle endaweni epholile; ilungele ukuhamba ngesikebhe, ukubhukuda, ukugwedla nokudoba. Ichibi kanye nolwandle oluhle olunesihlabathi kuyizinyathelo nje ukusuka emnyango ongaphambili! Indawo yethu inikeza isipiliyoni sempilo yechibi ngokuphelele
• Jabulela ukubukwa kwechibi okumangalisayo, ukushona kwelanga nezilwane zasendle kuwo wonke amafasitela amakhulu. Ikotishi lakhiwe linemibono emihle engqondweni ukuze ilethe ubuhle bangaphandle
• Izihlalo eziningi ezinethezekile ekamelweni elikhulu ukuze kuvumeleke ukuhlala kahle eduze kweziko elivuthayo izinkuni
• Isitebhisi sesitebhisi sine-futon edonsela umbhede wendlovukazi
• Ikhishi lamaphupho lompheki elihlome ngokugcwele elinazo zonke izinto ezibalulekile
• Igumbi lesikrini sesizini engu-3 ngaphandle kwegumbi lokudlela, bobabili banokufinyelela emphemeni omkhulu wobubanzi obugcwele.
• I-4-piece yokugeza
• Igumbi lokulala eliphakeme linombhede wendlovukazi, ikhabethe elivulekile, iminyango yevulandi eya emphemeni kanye nezingcezu ezi-3 ze-ensuite eneshawa enamathayela.
• Igumbi lokulala lesi-2 linombhede owodwa ophindwe kabili kanye nezicabha zevulandi eziya emphemeni.
• Igumbi lokulala lesi-3 linombhede owodwa ophindwe kabili.
• Indawo enkulu ngasemanzini enetheku KANYE nezitebhisi eziya ebhishi elinesihlabathi.
• Umgodi womlilo
• I-BBQ enamathuluzi e-propane nawe-BBQ.
• Amalayini anikeziwe.
• I-Smart TV eneSathelayithi.
• Isistimu yomsindo ekamelweni elikhulu.
• I-booster yocingo kanye ne-WiFi.
Isikebhe esifushane noma ukugibela isikebhe ukuya emhubheni odumile wase-Manitoba oxhuma i-Caddy Lake ne-South Cross Lake. Eduze kwezindlela eziningi zokuhamba izintaba nokuhamba ngebhayisikili kusukela kwabaqalayo ukuya kwabanolwazi. Imizuzu eyi-8 nje ukuya eWest Hawk lapho kunezindawo zokudlela, igesi, isitolo, ulwandle, amapaki, ithenisi. Ukuqashwa kuyatholakala eduze e-Caddy Lake Resort.
UGerrilyn Ungumbungazi ovelele